Stachelberg bụ nnukwu ụlọ ọgụ dị na Bohemia - PetrPikora.com
Ụlọ nche kachasị na Stachelberg na Bohemia
A na-ewu ụlọ ọrụ ahụ a na-akpọ artillery fort Stachelberg (nke a na-ejikarị aha Czech aha Ježová hora) rụọ n'afọ 1937 na 1938 dịka akụkụ nke mgbidi siri ike Czechoslovak. Ọ dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Oké Osimiri Ukwu (632 Hřebínek) nke dị nso na Rýchory Forest n'elu Babí n'etiti Trutnov na Žacléř. Ọrụ ya bụ ichebe Libavské Saddle, ọnụ ụzọ ámá nke dị n'agbata ugwu nke Osimiri Ukwu na Ugwu Crow, nke ndị ụsụụ ndị agha ji mee ihe n'oge gara aga maka ọgba aghara na Czech Republic na vice versa. n'oge na-aga nke ọma na Silesia. E wubeghị ebe siri ike na mgbidi ahụ ma taa, ọ bụ ihe ngosi nka nke ndị agha-akụkọ ihe mere eme.
Nnyocha nke mbara ala a na saịtị a tupu arụ ọrụ na nwube ikpeazụ ka emere na February 1935. A tụlere mgbanwe dị iche iche: Nna (673m), Vrchy (716m) na Stachelberg / 632, nke emesịrị họrọ.
Mgbe ị na-ahọpụta saịtị, a nabatara ọnọdụ kachasị mma nke ndekọ ụlọ nche ọ bụla na akaụntụ ma chọpụta nyocha ọzọ banyere ndị agha. Stachelberg si otú a ghọọ ihe iri na abụọ n'ime ihe nchebe nke Oderugwu na e mere atụmatụ dị ka nnukwu ụgbọ elu Czechoslovak siri ike.
E wuru ebe ewusiri ike dịka 11 na-abanye osisi ndị ejikọtara site na mpaghara okporo ụzọ ma kwadoo ya site na ntụpọ ndị na-ekpuchi ihe nkiri.
Ejiri 71, S 72, S 73, na S 74 mee ihe n'ọdụ ụgbọ mmiri nchebe dị ka ndị na-eche ihu n'ihu maka ụlọ nchebe ndị ọzọ. N'elu aka ekpe (edere), e nwetara akara ahịrị 81a, S 81b na S 82 dị iche iche, na mpaghara aka nri (n'ebe ndịda) na 69 na S 70 dị iche iche. Maka ụlọ elu ụlọ ọrụ ndị dị na ụlọ ọrụ S 75 na S 76, a na-ahọrọ elu elu aka nri na aka ekpe nke ala ahụ. N'ebe dị anya n'akụkụ ugwu (n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ), a na-edebanye logos abụọ nke 77 / S 78 na mbadamba ụrọ abụọ 79 / S 80. Ụlọ nke ikpeazụ, nke bụ akụkụ nke ala nke ebe e wusiri ike, bụ ụlọ nbata S 80a.
Akụkụ nke ebe e wusiri ike ga - abụ ụlọ nke 76a - ebe a na - ahụ maka ihe osise dị na 674m - Baba maka ịchọpụta ebe agha na njikwa ọkụ. Ebe ọ bụ na ebe a na-achọpụta ihe dị n'èzí n'etiti ebe e wusiri ike na n'ebe dị anya site na ụlọ ndị dị nso na S 71 na S 76, ọ dịghị njikọ na ala ahụ n'ihi ọnụ ahịa dị elu nke ịkwọ ụgbọala njikọ.
Ebe ọ bụ na January 1938 amalitewala iji aha ahụ bụ Ježová hora, ma a maara aha ahụ n'okpuru aha ukwu bụ Stachelberg, nke bụkwa aha aha ụlọ ọrụ ihe ochie, ma ọ bụ aha obodo ahụ bụ Babí.
Emere mgbidi ahụ malitere n'oge mgbụsị akwụkwọ site na 1937 site na Ing. Zdenko Kruliš na Konstruktiva, dika - Prague. A ga-agwụ ụlọ ahụ n'oge mgbụsị akwụkwọ nke 1939. Ndị ọrụ 1 500 na-arụ ọrụ n'esepụ atọ na ebe e wusiri ike. N'ime otu afọ na-arụ ọrụ, a gbajiri okporo ụzọ niile, ụlọ nzukọ, ụlọ nkwakọba ihe na ebe obibi maka ike ọkụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ma ọ bụ naanị akụkụ ụfọdụ nke ala dị na ya (banyere 10% n'ozuzu). A na-eji ihe niile a kpochapụrụ maka ebe a na-edebe ebe obibi na ebe e wusiri ike iji mee ka ebe obibi dị egwu, irighiri ihe na depressions. N'ihi ya, elu nke ebe ahụ e wusiri ike ga-abụ ebe dị mfe na-agụ akwụkwọ na-enweghị ike ịgụ na-agaghị ekwe ka ndị agha ahụ zoo.
Mgbe emechara ya, ọ ghaghị iji ngwá agha nke iri 100mm mee ihe na vz. 38 na 12 kilomita gburugburu na ọkụ ọkụ ruo 20 agba / min, asatọ 4,7cm antitank cannons vz. 36 na 6 km nso na 35 firing ọnụego / rpm; na mgbakwunye, ọtụtụ osisi iri na abuo na-agba ume iji chebe ebe kachasị mma nke elu ụlọ.
Ndị ọrụ 778 ndị ọrụ (ndị ọrụ 46, ndị na-elekọta 15, 717 ndị ikom) ka e mere atụmatụ maka ụlọ ahụ siri ike; tinyere ha, ụfọdụ ndị 240 ka a ga - etinye n'ime ala - ụlọ ọrụ abụọ - iji lụọ ọgụ n'elu ebe e wusiri ike. Ebe siri ike ga-eguzogide onye iro ahụ ruo ọnwa abụọ ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ njigide zuru ezu na njigide agha; a na-agbakọba ngwá agha, ihe oriri, mmanụ ụgbọala na ngwaọrụ ndị ọzọ maka ogologo oge.
Ọrụ niile a na-arụ na ebe e wusiri ike kwụsịrị na 23. Septemba 1938, mgbe a mara ọkwa ndị agha Czechoslovak n'ozuzu ha. Ebe siri ike, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke a, ndị agha 17 nọ na ya. Ógbè dịpụrụ adịpụ sitere na Trutnov, dị njikere ma dị njikere maka nchebe. Otú ọ dị, ọ dị anya na ịrụzu ọrụ na ọchịchọ nke atụmatụ mbụ.
Ndị agha nke ebe ahụ e wusiri ike weere òkè n'ime obere ihe agha ndị agha na ndị òtù Freemorps nke Sudeten bụ ndị si Liebau (bụ Lubawka dị na Poland) na Czechoslovakia. Otú ọ dị, ọ dịghị ezigbo ngwakọta agha nke ihe a na-eme ka e sie ike.
29. September 1938 na Munich banyere Banyere Munich Agreement, bụ nke kwuru na mpaghara Czechoslovakia dị na mpaghara, gụnyere Trutnov, German Third Reich. Ewere ngwá agha, ngwá ọrụ na akụrụngwa, ígwè ọrụ na ihe owuwu ụlọ site na ebe e wusiri ike. Enwere ike ibibi ihe niile a na-enweghị ike ịpụ. Mgbe ikpochapu n'okpuruala, ndi injinia mere otutu otiti, ebe ha na-agagharia site n'idi elu na ebe mkpofu. N'ihi ọdọ mmiri ndị dị omimi, ala jupụtara na mmiri n'ime ụbọchị ole na ole, na-egbochi ịbanye n'ime ime ụlọ ahụ ruo 2000.
Ndị òtù 8 bụ ndị mbụ ịbanye na mpaghara Czechoslovak. regiment III. Ngalaba na-agba ọsọ nke Wehrmacht, ebe e wusiri ike karịsịa 9. Ụlọ ọrụ a. N'iburu na ebe ahụ ewusiri ike enweghị njedebe, mmiri jupụtara na ala ma nwee ọtụtụ obodo na obodo ndị dị ya nso, ndị Germany enweghị mmasị ịnwale ngwá agha, ngalaba ọzụzụ ma ọ bụ na-eji ya eme ihe. Ntre enye ama ọkpọn̄ ke ofụri ekọn̄. N'ime afọ 1945, ụlọ ndị dị n'ebe ahụ siri ike dị njikere iji chebe onwe ha megide ọganihu Red Army, ma ọ dịghị agha n'ebe ahụ.
Ọtụtụ afọ mgbe agha ahụ gasịrị, a ka na-atụle ihe ndị agha, site na 50. Otú ọ dị, a gbahapụrụ echiche a ruo ọtụtụ afọ, dịka ebe e wusiri ike nke Stachelberg. Nanị ihe TS 73 zuru ezu bụ na 80. afọ dịka ebe nchekwa nchekwa chemical (edo), nke e si na ụlọ na 1990 kpụpụ.
Kemgbe 1993, ụlọ ọrụ ihe ngosi nke Czechoslovakia na-amụba mgbe nile na-arụ ọrụ na ebe e wusiri ike. Mgbasa ikpeazụ nke ihe ngosi ahụ mere n'oge opupu ihe ubi nke 2010, mgbe a meghere ọnụ ụlọ nile dị n'okpuru ala. A na-eme njem nlegharị anya n'okpuru 1 otu awa.
A na-arụ ọrụ ihe ngosi nka site na Fortis na-arụ ọrụ na Trutnov. Kemgbe 2005, òtù Stachelberg Civic (ebe 2015 gbanwere aha ya na Stachelberg, zs), onye na-anọchite anya Fortis, ejiriwo ebe nchekwa ahụ. Maka ndị niile so n'ìgwè ahụ, enwere ịnụ ọkụ n'obi na mmasị na akụkọ ihe mere eme nke Czechoslovak. Aghaghachiri ebe siri ike na ọnọdụ mbụ ya na oge n'efu na n'enweghi ụgwọ ọ bụla, ụlọ ọrụ ihe nka enweghị ọrụ ọ bụla akwụ ụgwọ na ọrụ nwughari ọ bụla akwụ ụgwọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nanị site na ụgwọ ọnụ ụzọ.
A na-ejizi nwayọọ nwayọọ arụghachi ụlọ TS 73, ebe a na-eji nwayọọ nwayọọ arụghachi ya ma ọ bụ ugbu a bụ ọnụ ụzọ nke mgbagwoju ala (ọ dịkarịa ala 1 × kwa elekere dị ka ozi dị ugbu a na ụlọ ọrụ ihe ngosi nka). Ihe ọzọ nwere ike ịnweta bụ ihe dị mfe vz.37, nke a na-eji ngwá agha ma tinye ya na steeti 1938. N'elu na gburugburu ebe siri ike, ndị njem ga-eduzi na njem mmụta nke jikọtara Stachelberg na ụlọ TSFNNX nke dị iche iche dị na Libč.
Site na ụgbọ ala sitere na Trutnov ma ọ bụ Zacler (401), pụọ na nkwụsịtụ ebe a na-agha Babịlọn. Site na nkwụsị ya na ụzọ nrịba ama mara banyere 300 m.
Site na ụgbọ ala ma ọ bụ na-agbago n'okporo ụzọ NNNUMX site na Trutnov ka Žacléř, ụgbọala dị na nkwụsị ụgbọ elu n'elu obodo Babí (site na Trutnov 300 km, site na Žacléř 10 km).
Soro ụzọ njem nleta na-acha uhie uhie (Ụzọ nke Čapek ụmụnna) site na Trutnov site na Castle Hill. Ma ọ bụ site n'akụkụ nke ọzọ nke Pomezni nwa osisi site na Albeřice na Rychory. Taa, ọ ga-ekwe omume ịbanye n'ebe e wusiri ike dịka njem si na Libč site na TS 63. Ejiri okporo ụzọ a na-agba ọsọ na-esi ike, na 8 wuru ụlọ ntinye akwụkwọ osisi na otu ntọala ntọala tinyere ebe nchekwa Stachelberg n'okpuru iwu. Maka ụlọ ọ bụla enwere oghere ọmụma maka ihe gbasara Cs. mgbidi.
Elekere 23 gara aga